ETAZONIA: Fizaràna Lahatsary Manasongadina Ny Mpitandro Ny Filaminana ao Los Angeles · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2018 6:40 GMT
Mijere ao amin'ny Technorati (Fanamarihana: tapaka ity rohy ity) amin'izao ora izao ary ho hitanao ao ireo lahatsary enina amin'ny dimy ambinifolo fijerin'ireo blaogera, mampiseho tranga mitovy – ireo manampahefana mpitandro ny filaminana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Californie mampiasa basy pistolet Taser amina safiotra iray Iraniana-Amerikana mpianatra, Mostafa Tabatabainejad, tao amin'ny Trano Famakiamboky ao UCLA (Anjerimanontolo an'i Californie, Los Angeles). Inty ny iray tamin'ireo lahatsary, avy amin'ny mpianatra ho mpanao gazety an'ny UCLA, The Daily Bruin, izay manazava ny tantara (izay misy an'ireo sary sy fiteny tafahoatra) toy izao:
Raha mila fanampim-baovao sy fanehoankevitra mismisy kokoa, topazo maso ny fandrakofana an'ity tantara ity ataon'ny blaogin'ny vondrona Iraniana Iranian Truth (Fahamarinana iraniana). Mety misy fandrakofana marobe ao anaty tontolom-bolongana amin'ny fiteny Persiàna – tsy azo tsinontsinoavina ny isan'ireo iraniàna mponina i Los Angeles izay matetika antsoiny somary sangisangy hoe Tehrangeles.
Ny raharaha UCLA dia lahatsary iray tamin'ireo telo samihafa mampiseho ny mpitandro ny filaminana ao Los Angeles hita mampiasa hery tsy amim-piheverana mandritra ny fisamborana an'ireo olona ahiahiana . Ireo olom-pirenena tsotra no naka an'ireo lahatsary telo ireo. Ny lahatsary voalohany tamin'ireo telo dia nipoitra tamin'ny YouTube, ary mampiseho mpitandro filaminana avy amin'ny LAPD mamely totohondry imbetsaka ny tavan'ilay ahiahiana, toarian'ny fifanenjehjana an-tongotra. Ny lahatsary faharoa, izay tsy mbola nipoitra tamin'ny tambajotra, nefa nasehon'ny mpisolovavan'ny niharam-boina, ho porofo tao amin'ny L.A. Times, tamin'ny Alatsinainy 13 Novambra, dia nahitàna tsy manan-kialofana iray noahiahiana, nofatorana rojo vy ny tànany, norarafàna tsifotra dipoavatra, nataon'ilay manampahefana nisamobotra azy. Afaka madiodio ilay manampahefana hatreo, tamin'ny fitanisàna ny fifehezantenan'ilay manampahefana nanoloana ny “fitondrantena mpila ady, mpandrahona sy liana ady” nasehon'ilay niharam-boina.
Manome an'ireo rohy mankamin'ireo tranga hafa nataon'ireo mpitandro ny filaminana i Emily ao amin'ny PicturePhoning.com, mandetika an'ireo mpitandro filaminana voarakitr'ireo olom-pirenena tao Etazonia sy tany ivelany tamin'ny lahatsary. Sahala amin'ny toa manaporofo fironana iray io izay manao afa-tsy ny mitombo arakaraky ny mahamaro ny olona afaka miditra amin'ny fandraketana lahatsary amin'ny finday. Mamporisika an'ireo olom-pirenena hampiasa ny telefonany sy ny fakantsariny ny vondrona sasantsasany mba handraketana an'ireo fanararaotam-pahefana ataon'ny mpitandro filaminana ary handefa ireo sary any anatin'ireo vohikala fizaràna lahatsary. Sherman Austin, mpanorina ny Cop Watch L.A., vohikala fanarahamaso ny mpitandro filaminana, niresaka tamin'ny Yahoo! nitatitra fa:
Manentana ny rehetra izahay mba hanana fakantsary iray eny aminy amin'ny fotoana rehetra ka rehefa misy zavatra mitranga dia mba afaka tehirizina izany. Ilay hevitra fanarahamaso ny mpitandro filaminana dia zavatra iray ezahantsika atosika ho toy ny endrika iray amin'ny fihetsehana mivantana.
Heverinao ve fa mety ho endrika iray mahomby io hanaovana andrimaso ny mpitandro filaminana?